Shrika Jubbooyinka oo lagu heshiiyay - BBC Somali
Shrika Jubbooyinka oo lagu heshiiyay
22 Oktoobar 2013
Image caption Maammulka Jubbooyinka ayaa oggolaaday in ciidammada dibedda ka jooga Kismaayo ay gudaha magaalada u galaan
Maammulka KMG ee Jubbooyinka ayaa markii ugu horreysay oggolaaday inuu ka qaybqaata shirka dib u heshiisiinta ee lagu wada in lagu qabta Muqdisho 2-da bisha soo socota ee Nofembar
Dowlada federaalka iyo maamulka Jubooyinka aya ku heshiiyey in shirkaas lagu qabta magaalada Muqdisho, ayna ka soo qayb galaan dhamaan dadka degan gobollada Jubooyinka.
Wasiir kuxigeenka gaashaandhiga ee dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Dheere, ayaa sheegay in shirkaasi looga hadli doonaa "sidii is fahan buuxa iyo wadatashi looga yeelan lahaa sidii horay looga sii wadi lahaa maamulka Jubbooyinka."
Cabdiraxmaan Dheere ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyn doonto, soo afjarida madmadoowga u dhaxeeya dadka wada daggan deegaankaasi, iyo in ciidammada joogo banaanka magaalada Kismaayo oo markii hore dagaal uu dhex maray iyaga iyo maamulka Jubbooyinka in dib loogu soo celiyo magaalada , ayna ka mid noqdaan ciidamada Qaranka.
Maammulka KMG ee Jubbooyinka ayaa sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen ergada shirka ka qeybgalaysa.
Cabdiqani Cabdi oo ka tirsan maammulka Jubbooyinka ayaa sheegay in shirkaasi ay ka qeyb galayaan boqol iyo konton qof, "boqol ka mid ah waxa soo xulaya ayuu yiri maamulka KMG ee Jubbooyinka halka dowladana ay keeneeysa konton."
Wuxuu sidoo kale sheegay in waxyaabaha shirka lagu lafaguri doono ay tahay sidii ay isugu soo dhawaan lahaayeen beelihii horay ugu dagaallamay magaalada Kismaayo.
Kismaayo dowladda "ha lagu wareejiyo"
4 Agoosto 2013
15 Luulyo 2013
Axmed Madoobe oo qarax lala beegsaday